Marka Aqoonta iyo Iimaanka la isku xiro! | Doodwadaag waa Danwadaag.
Marka Aqoonta iyo Iimaanka la isku xiro!
Maalin dhaweyd waxaan sheekaysanay nin dhalinyaro ah oo runtii caqli iyo garasho saa’id ahi iiga muuqatay. Waa nin cilmiga sayniska illaa xad wax ka yaqaan oo isaga ayaaba dhaqtar ah. Sidoo kale waxaa iiga muuqatay inuu taariikhda dunida uu illaa xad wax ka yaqaan. Haddaanu in door ah sheekaysanayney waxay sheekadii nala gashay cilmigii muslimiintii hore dunida ku soo kordhiyeen gaar ahaan xilliyadii loo yaqaanay xilligii dahabiga ahaa, waa shantii qarni ee ugu horraysay e.
Waxa uu nolosha iga siiyey sawir muujinaya in muslimiinta ka hor dadku aad u liiteen. Waxaan ku iri muslimiintu aqoonta ma ayan curin oo waa looga horreeyey, kaliya kutubtii dadyowgii hore ayay tarjumeen ha ahaato buugta xaddaaradihii bariga iyo galbeedka ee caafimaadka, xisaabta, sayniska kale, xiddigiska iyo maamulka iyo siyaasaddaba. Markii ay tarjunteen meelaha qaarkood waxbay ku soo kodhiyeen sida xisaabta, kimistariga iyo xiddigiska.
Saaxiibkay halkaa waxa uu ka sawirtay inaan liidayo muslimiinta difaac ay dadkeennu caan ku yihiin ayuu galay. Waxa uu yiri Islaamka ka hor dunidu mugdi bay ahayd. Waxa uu yiri dadka kale oo dhan cawaan bay ahaayeen, wax aan sidaa u sii buurnayn dhanka bariga ayay aqooni taallay. Waxaan ku iri ma ila qirsan tahay in Baqdaad iyo Andalus ku yaaleen xarumo buugaagta lagu tarjumo oo laga soo tarjumay afafkii Giriiga, Laatiinka, Asiiriyaanka, Faarsiga, Hinduga.. Iwm carabina loo rogay? Haa ayuu yiri. Waxaan ku iri buugtaa maxaa ku qornaa? Saw cilmi dunida lagu kala waday ma ahan?. Hadduu cabbaar aamusay waxa uu yiri inta yar ee aynu maalin walba carruurta ku seexino ee ah Yurub mugdi bay ahayd, muslimiinta ayay cilmiga ka qaateen.
Waxaan ku iri waa runtaa oo kutub badan oo culima muslimiin ay qoreen ayay Yurub dib u tarjumatay laakiin weli ma is waydiisay micnaha ka dambeeya erayga reer Yurub ugu yeeraan marxaladdaa ee ay u bixiyeen “Dark Ages” waxaan ku iri Mugdigu sidiisaba waa marxalad u dhaxaysa la ilays oo midina ka horreeyey midina ka dambeeyey. Yacni xilligaa Dark Age ka hor dhanka aqoonta ilays bay kaga jireen, ilayskiina dib bay u heleen.
Anoo hadalka sii wata waxaan ku iri muslimiinta gaar ahaan Carabta waa caksiga ama liddiga Yurub. Waa laba mugdi oo ilays u dhaxeeyey. Islaamka ka hor mugdi ayay dhan walba kaga jireen, ilays ayay heleen, ka dibna mugdigoodii hore ayay dib ugu laabteen, inkasta oo ilaysku damin! Waxaan ku iri si aynu u fahamno mushkiladaha nolosha aynu kala saarno oo mid walba iskiisa u daraasayno ilayska iimaanka iyo ilayska aqoonta. Haddii aynu labada ilays isla helno baraare iyo bashbash dheh.
Waxa uu ku soo celceliyey hadalkii hore ee ahaa inaan islaamka nolol ka horrayn. Waxaan ku iri aynu su’aal iswaydiino. Muslimiintii hore iyagaa iimaanka saxda ah ee noloshu la bilaabatay haystaye maxay u tarjumanayeen kutubtii dadyowga kale, saw iyagu dadka cilmi oo dhan ma barayn oo mugdiga kama ayan saarayn? Saaxiibkay waxaa iiga muuqday degenaansho iyo weliba inuu isku dayey inuu ka jawaabo su’aalahayga waxaa se badan dhallinyarada lagu buuxiyey ” Dunidu mugdi bay ahayd Islaamka ka hor” ee aan xitaa iswaydiin mugdiga laga hadlayo waa kee? yaa se mugdigaa ku jirey? Dhallinyaraas oo qaatkood culuumta maadiga ah ka gaaray darajo sare waaba kugu qarxayaan!
WQ Burhaan Muuse